Soo dejisan Dolphin 4.0.2 iyo 4.0.8700 rc – Vessoft
32 qayb (x86)
Software Tani loo baahan yahay DirectX si saxda ah loo hawlgeliyo
Soo dejisan Dolphin
Hoomboro – software ah in loo maqli karo tiro badan oo ka mid ah kulan ka gaymamka of GameCube iyo Wii. Software wuxuu kuu ogol yahay in loo maqli kulan ee ugu HD iyo yaraynta isku qasayo image ka. Isticmaalka dhisay-ku jira buuggan, hoomboro wanaajinaya tayada dareen in 3D sawirada kombiyuutar lagu badbaadinayo faahfaahsan sawirada. Software The kuu ogolaanayaa inaad u astaysto keyboard computer ka yar baahida ciyaaraha iyo isticmaali ilaaliyaal ciyaar kala duwan. Software waxay leedahay interface fudud iyo fududahay in la isticmaalo.
Playback of kulan GameCube iyo Wii on aad computer
Support for ciyaarta online
Kor u qaadida tayada image
Support for ilaaliyaal ciyaarta kala duwan
Comments on Dolphin:
Dolphin Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... VirtualBox 5.1.6
English, Українська, Français, Español... JoyToKey 5.8.2
English, Français, Deutsch, Italiano... BlueStacks App Player 2.5.70.6901
العربية, English, Українська, Français... YouWave 3.30
Emulators Mid ka mid ah emulators keentay ciyaarta PlayStation qaadan karo Console ah. Software wuxuu taageeraa kulan badan iyo maamulka adeegga Network PlayStation ah.
العربية, English, Українська, Français... Genymotion 2.6.0
DVD PixPlay 8.01
Saxannada Photo Software ayaa si ay u abuuraan slideshows iyo natiijooyinka ku cajaladaha. Software waxa ka mid ah qalab kala duwan si ay u astaysto habka abuurniinta.
Webcams software ee isgaarsiinta qoraalka iyo video la isticmaala kale ee adduunka ah. Sidoo kale waxaa suurogal ah in uu abaabulo qolalka gaar ah mawduucyada kala duwan si looga doodo.
العربية, English, Français, Español... Auslogics BoostSpeed 9
Ayna System Ku haboon qalab ugu wanaagsan loo gaarsiiyo, nadiif ah oo la saxo qaladaad ee nidaamka qalliinka. Software wuxuu kuu ogol yahay in la bilaabay deg deg ah oo ka mid ah ciyaaraha iyo codsiyada sameeyo.
Qabashada Screen Streaming video Qalabka ayaa in lagu soo qabto video ka shaashadda kombuyuutarka aad. Software ayaa awood u baahinta falalka ka shaashadda adeegyada video caan ah.
English, Français, Español, Deutsch... HOA Tracking Database 2.4.5
Qaar kale waxay Software ayaa u helaan in ay database ee ururka mulkiileyaasha. Software ayaa awood u siineysaa inay baadhaan xogta lagama maarmaanka ah, maareeyaan kafado xisaab iyo taariikh u arkaan bixinta wararka.
Qabashada Screen Software in ay qabsadaan video ka shaashadda kombuyuutarka aad. Sidoo kale waxa ay taageertaa diiwaanka qeybo ka mid ah shaashadda iyo abuuraa screenshots ah.
Google Chrome 54.0.2840.59 iyo 55.0.2883.7 dev